Xildhibaannada Maamulka 'Hirshabelle' Oo ka Noday Mooshin ka dhan ahaa Waare.
Monday October 08, 2018 - 11:18:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maamulka isku magacaabay Hirshabeelle ayaa sheegay in uu xalliyay khalalaasa siyaasadeed oo ka dhax oognaa maalmihii lasoo dhaafay.
Sawir Hore Waare iyo saraakiisha AMISOM oo Jowhar ku sugan
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee Sh/dhexe ayaa sheegaya in kulamo isdaba joog ah ay dhaxmareen mas'uuliyiinta ugu sarraysa maamulka 'Hirshabelle' waxaana kulamadaas looga arrinsanayay khilaafka hareeyay maamulka.
Max'med Cabdi Waare oo safar dhanka cirka ah uga yimid magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in uu lacago laaluush ah ku kala furfuray xildhibaanno ku kacsanaa maamulkiisa, illaa 50 xildhibaan ayaa laba maalin ka hor sheegay in ay gudbiyeen mooshin ka dhan ah Waare.
Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo ku magacaaban guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle ayaa warbaahinta u sheegay in xildhibaannadii mooshinka keenay ay dib uga laabteen wuxuuna ugu baaqay Waare in uu shaqadiisa sii wato.
Maamulka Fadhiidka ah ee xarunta ka dhigtay magaalada Jowhar waxaa hareeyay khilaafaad daakhili ah iyo Faragelinta ay ku heyso dowladda Federaalka wuxuuna dhowaan shaaciyay in uu kasoo go'ay Golaha iskaadhiga Maamul goboleedyada ee sida aadka ah u khilaafsan Dowladda Farmaajo.
27 qof oo uu kamid ahaa Wasiirkii hore ee Arrimaha dibadda oo ku dhintay Qaraxii Muqdisho.
Wasiir katirsan Maamulka 'Puntland' Oo ka badaaday Weerar lagu dili lahaa.
Hormuud Foundation oo lacag dhan Boqol Kun oo Dollar u qeybisay Kun carruur Agoon ah
Dowladda Kenya oo Sheegtay in Muddo 3 Bilood ah ay Hakad Gelisay Duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi.
Maamulka Puntland oo is hortaag Ku sameeyay Shir uu Farmaajo ku qabasan lahaa Magaalada Garoowe.
Dowladda Kenya oo xaqiijisay in Weerar Khasaara dhaliyay uu uga yimid dhanka Al Shabaab.